लोक संगीतका सबैभन्दा महँगा सर्जक तथा संगीतकार बसन्त थापा संगको अन्तर्वार्ता: – Enepal Khabar
लोक संगीतका सबैभन्दा महँगा सर्जक तथा संगीतकार बसन्त थापा संगको अन्तर्वार्ता:
फागुन १५ काठमाण्डौ- नेपाली लोक सांगीतिक आकाशका निक्कै ब्यस्त र महंगा सर्जक/गायक तथा संगीतकार बसन्त थापा २०५८ साल मा “निलो फेवाताल” गीति कोशेली बजारमा ल्याएर औपचारीक रूपमा सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका थापाका ८ सय देखि १ हजार जति गीतहरू बजारमा आइसकेका छन। घर परिवारको साथ बिना पनि म केहि गर्न सक्छु भन्ने आत्मवलका साथ गीत संगितमा लागेका बसन्त थापा जस्ले आज सम्म “निलो फेवाताल”, “वारी घुम्टे पारी गाजा”,”माछा मिठो असला” “बाग्लुङ बजारमा”,”फुल्यो वाँमरी”,शुभ विवाह लेखेको मिनी बस”, “सेल्फि”,”धौलागीरीको छायाँ”,”आज संगै”,”उहि खोलीको पानी”,”बर्बर आँशु झर्दा खेरीमा”,जोगीको भेषैमा”,”फूल राम्रो गुलावको काँडा भएनी””जूनले मात्र देख्छ”,”नजाउ है सानु पंधेरीमा”,डाँडै फुर्के सल्लो,रूमाल हल्लाई हल्लाई,आज माया म संग तरक तरक छ,डाँडै बिसानी”,”पिरतीको डोरी”,”गाईने दाई” “हाँसि हाँसी” लगायत थुप्रै सफल मौलिक सृजनाहरू पस्कीन सफल उनै गायक/सर्जक तथा संगीतकार बसन्त थापा संग संस्थापक राजन क्षेत्रीको सहयोगमा eनेपाल खबर संबाददाता तिलक बोहराले लिएको अन्तर्वार्ता यहाँहरूका लागि eनेपाल खबर डट कममा:
१)बसन्त सर, साँगीतिक क्षेत्रमा कहिले देखि लाग्नुभयो ? यहाँको पहिलो एल्बम कुन हो ?
कलाकारीतामा सानै देखि चेतना थियो तर, औपचारीक रूपमा बि सं २०५८ /५९ साल तिर प्रबेश गरेको हुं र त्यती बेला निक्कै चलेको “निलो फेवाताल” पहिलो एल्बम हो ।लय,शब्द र स्वर मेरो आफ्नै रहेको गीतमा गायीका लक्ष्मी न्यौपाने दिदिले साथ दिनुभएको छ।
२) कस्को साथ र हौंशलाले गर्दा साँगीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भयो ?
खास ब्यक्ति कोहि नभए पनि हाम्रो समाज र अप्रत्यक्ष रूपमा अग्रजहरू जस्ले समय अनुसार आफ्ना सृजनाहरू पस्कनु भयो उहाँहरू नै मेरो प्रेरणाको श्रोत हुनूहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई मेरो सम्मान छ ।
३) कला र गला मात्र भएर यो क्षेत्रमा लाग्न र टिक्न गार्हो छ भन्ने सुनिन्छ नि? तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
हो, एक हद सम्म यो कुरा पनि एकदम सहि हो। कला र गला मात्र भएर मात्र हुंदैन । तर कला र गलालाई ब्यबस्थीत गर्न जान्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।जो कलाकारले कला र गलालाई ब्यबस्थीत गर्न सक्छ ऊ नै कलाकार हो जस्तो लाग्छ ।
४) कला र गलालाई ब्यबस्थित गर्दै एक छत्र राज गर्न सफल हुनुहून्छ, यहाँले कति नयाँ कलाकारलाई साँगीतिक क्षेत्रमा भित्र्याउनु भयो ?
त्यसरी एक छत्र राज नै त नभनौं होला तर मेरो तर्फ बाट हाम्रो मौलिक संस्कृती ,नेपाली पन र नेपाली माटोले सिकाएका केही संगीत धुनहरू मेरो तर्फ बाट सृजना गरूने प्रयास गरेको छु र सबैले मन पराई दिनु भएको छ यहि नै खुसी लाग्छ मलाई र नयाँ कलाकारहरू उत्पादन गर्ने बिषयमा म अरू सर्जक भन्दा केही अगाडी छु भन्ने लाग्छ किनकी अरूले उत्पादन भइसकेका राम्रा कलाकारहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्ना सृजनाहरू बजारमा पस्कनुहुन्छ ।तर म राम्रो बिशेषता भएका नयाँ कलाकारलाई बोकेर संधै अगाडी हिन्ने गर्छु।मैले उत्पादन गरेका थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ जो तपाईंलाई पनि अबगत नै छ ।
५) साँगीतिक क्षेत्रमा लाग्न चाहने कलाकार जो आर्थिक अबस्था कम्जोर छ उनिहरूलाई साथ दिएर अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ ?
राम्रो बिशेषता बोकेका त्यस्ता जो कुनै पनि नयाँ कलाकारलाई संधै स्वागत छ र मैले आफ्नो तर्फ बाट गर्ने काम कर्तब्य र मेरो सहयोग सदा रहने छ ।
६)प्रतिस्पर्धाको नाममा कम पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने सर्जक/कलाकारको बिचमा यहाँले त्यसरी अरूले भन्दा कम पारिश्रमिक लिएर काम गर्नुभएको छ की छैन ?
मेरो केशमा मेरो धारणा अली फरक छ। मेहनत अनुसारको पारिश्रमिक लिनुपर्छ,मैले जति मेहनत गर्छु त्यती लिन्छु । बसन्त थापाको पारिश्रमिक धेरै छ भनेर धेरै कलाकारले भनेको सुनेको छु ।
७)गीत गायर,लय सृजना गरेरै र शब्द सृजना गरेरै आफ्नो जीवन धान्न सक्ने अबस्था छ कि छैन ?
अबस्य पनि छ नि किन छैन ? धेरै कलाकार र सर्जकहरू अर्थिक रूपमा बलियो हुनुभएको छ । इमान्दारीता र संस्कार कलाकारीतामा हुनुपर्छ सबै कलाकारहरू बाँच्न सक्ने माहोल अहिले छ त्यस्मा पनि बाहिरका कार्यक्रमहरूमा ठेक्का पर्था र बिचौलियाहरूले खाने प्रचलन हट्यो भने सबै कलाकार र सर्जकहरू बाँच्न सक्छन। कसरि भन्नुहुन्छ भने,गायक महोत्सबमा गएर गीत गाउँछ,गायर लिएको पैसाले सर्जक संग गीत बनाउन सक्छ र सर्जक स्टुडियो पुग्छ । त्यसैले यस संग सम्बन्धित सबै बाँच्न सक्ने अबस्था छ ।पछिल्लो समयमा युट्युब मेला महोत्सब बाट पनि आम्दानि बढेको छ त्यसकारण अब कलाकार सर्जक सबै बाँच्न सक्ने आधार झनै बलियो बन्दै गइरहेको छ ।
८)देश बित्र र बाहिर लाग्ने मेला महोत्सबमा बिचौलियाहरू हाबी भएको अबस्थामा हजुरले बिचौलियालाई कमिसन दिएर कार्यक्रममा जानु परेको अबस्था छ कि छैन ?
एकदमै, बिचौलियाको प्रभाबमा म पनि परें दुई तीन बर्ष अगाडी त्यस पछाडी अहिले आएर बिचौलीयेको पहिचान भए पछि म उनिहरूको सम्पर्कमा छैन र आजभोली आयोजकहरूले सिधै फोन गर्नुभयो भने म कार्यक्रममा गर्छु र बिचौलियाहरूको प्रभाव जम्नु हुंदैन तिनीहरूलाई निस्तेज पार्नको लागि अलीकती गन्ध पाएं भने मैले त्यो कार्यक्रम नै गर्दिन । बिचौलियाहरूको घोर बिरोधी हुं म।
९)देश बिदेशका धेरै स्टेज प्रोग्राममा ब्यस्त हुनुहुन्छ । आज सम्म कति देशहरूमा कार्यक्रमकालागी जानु भयो ?
म बिदेशको यात्रामा भन्नुपर्दा दुबई,जापान ,कोरिया,यु के,युरोप अष्ट्रेलिया लगाएतका धेरै देशहरूमा पुगेको छु र आगामी मार्चमा कतार अप्रिलमा जापान जाँदै छु ।
१०)साँगीतिक क्षेत्रमा हरियाली बसन्त बनेर रहन सफल बसन्त थापाको पारिवारीक तथा ब्यक्तिगत जीवनमा कत्तिको हरियाली छाएको छ नी ?
हरियाली बसन्त भनेर जुन बिम्बात्मक प्रश्न गर्नुभएकोमा धन्यवाद! संघर्षको समयलाई शिशिर यामको रूपमा लिने हो भने अहिले बशन्त यामकै रूपमा मान्नु पर्छ।खुसी छु आफ्ना सृजनाले ठाउँ पाउँदा बशन्त बहार नै लाग्छ ( प्रफुल्लित हुंदै)।अझै गर्न बाँकी छ तर पनि खुसी छु । भबिश्य नभएको क्षेत्रमा छोराले समय खर्चिरहेको छ भन्दा दूःख लाग्थ्यो।बुबा- आमा र परिवारको साथ थिएन ।अहिले सफल हुंदै जाँदा आहा! छोराले गरेको छ गरे पछि हुने रहेछ भन्ने बिश्वास जीत्न सफल भएको छु सबैको साथ पाएको छु ।त्यसैले मेरो ब्यक्तिगत/पारिवारीक जीवन र कलाकारीता प्रति एकदम खुसी छु ।
११)कलाकार भित्र पनि एउटा ब्यस्त कलाकार,घर परिवारलाई समय दिन नसकेको कारण गुनासो सुन्न परेको अबस्था छ कि छैन ?
अबस्य पनि, यो असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नु भयो,सृजनात्मक क्षेत्रमा लागेर सृजना त्यसै आउँदैन। सृजना गर्दा कहिले काहिं मेरा कृयाकलाप देख्दा पागल जस्तै मान्नुहुन्छ मेरो परिवारले।सृजना गर्दा परिवारलाई दिने समय अभाव नै हुंदोरहेछ ।
१२)परिवारलाई समय दिनका लागि स्थापित कलाकारहरू अमेरीका लगायतका बिकसित देशहरूमा बसाईं सरेको अबस्था छ । हजुरलाई पनि परिवार संगै अमेरीका लगायतका देशहरूमा गएर बसौं जस्तो लाग्दैन ?
जुन कुनै पनि क्षेत्रमा लागेका हरेक नेपाली उच्च जीवन स्तरको खोजीमा हुन्छन कलाकार मात्र हैन। म पनि आम नेपाली नै हो र नेपाली भन्दा फरक मान्छै होइन त्यसैले परिवारलाई समय दिने क्रममा म पनि बिकसित देशहरूमा गएर उतै रहन पनि सक्छु ।
१३) यहाँका लाखौं दर्शक श्रोताहरू र शुभचिन्तक मध्ये कसैले प्रेम प्रश्ताब राख्नु भयो कि भएन?
प्रेम प्रश्ताब नआएका होइनन् आए तर,त्यस्लाई एउटा क्षेणीक आकर्षणको रूपमा हेरिनु पर्छ,मानिसको स्वभाव नै हो सामाजिक मान्छे र राम्रो मान्छेलाई देख्दा बिपरित लिंगी आकर्षित हुनु स्वभाविक हो ।म पारिवारीक मान्छे श्रीमति,छोरा,समाज मेरा शुभचिन्तक हुनुहुन्छ त्यसैले त्यस्ता प्रस्ताब स्विकार गर्नु गलत हो ।
१४) आज सम्म यहाँले कति अवार्ड जीत्न सफल हुनुभयो ?
त्यस्तै १२/१५ अवार्ड हात परे होलान ! म काममा धेरै बिश्वास गर्छु अवार्डमा होइन,तर पनि कतिपय आयोजकले मेरा सृजना मन पराएर अवार्ड मार्फत सम्मान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई ह्दय देखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो अवार्डहरूले गर्दा सृजना गर्ने थप हौंसला मिलेको छ ।
१५)देश भित्र र देश बाहिरका दर्शक श्रोताहरूमा कस्को धेरै माया पाउनु भएको छ?
धेरै नै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो,देश भित्र र बाहिरका दर्शक श्रोतामा मैले धेरै भिन्नता पाएको छु। देश भित्रको आम दर्शक श्रोता भन्दा मलाई बिदेशमा हुनुभएको दर्शक श्रोता नै बढी मन पर्छ। किनकी,उहाँहरूले मौलीकतालाई धेरै महत्व दिनुहुन्छ, नेपाली माटोको गन्ध आउने गीतहरू मनपराउनुहुन्छ त्यस्तै गीत सुन्न मन पराउनुहुन्छ ।आफ्नो पन मौलीकतामा झल्कन्छ र त्यही मौलीकता बोकेका सृजनाहरू मनपाराएको कारण मलाई बिदेशमा रहनुभएको दर्शक श्रोताले धेरै माया गर्नुहुन्छ ।
१६)नेपाली संगीतको क्षेत्रमा पछिल्लो समय धेरै बिकृती छाईरहेको छ। यस्लाई रोक्नको लागि तपाईं एउटा राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको केन्द्रिय सदस्य भएको नाताले कस्तो कदम चाल्नु भएको छ? यो बिकृतिलाई रोक्न नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
पछिल्लो समय बिकृति त छ नै तर पुग्नु पर्ने ठाउँ त एउटै हो तर कसैले बाटो बिराउनु भएको छ तर राम्रो सर्जकहरूले बाटो बिराउनु हुंदैन भन्ने लाग्छ । प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने कामहरू त धेरै छन तर केही कुराहरू कानुनले बर्जीत गरेको छ ती कुराहरूमा प्रतिष्ठानले पनि केही गर्न मिल्दैन। यो चल्दै जान्छ र बिस्तारै निष्तेज हुन्छ ।
१७)राम्रा नयाँ सर्जक र लगानी कर्ताहरू हजुरको सहयोगको खोजीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हजुरलाई कसरि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ?
म विदेशमा भएको कारण धेरैले गुनासो गर्नुहुन्छ। धेरै संग सम्पर्कमा छु,देश बिदेशमा हुने आफन्त शुभचिन्तकहरू संग सम्पर्कमा त छु तर कतिपयले म्यासेज गर्नुहुन्छ मैले जवाफ दिन नसकेको अबस्था छ। अब म यस्लाई ब्यवस्थित गर्दैछु। Basanta Thapa र Basanta Thapa Kaji दुई वटा फेशबुक अकाउण्ट,मोबाईल नम्बर 9851138956 email:singerbasantathapa@gmail.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । तर समय ब्यबस्थित गर्न नसकेको कारण जवाफ दिन नसकेकोले उहाँहरू प्रति माफी माग्छु ।
१८)मैले नसोधेको र हजुरले यो कुरा सोधे हुन्थ्यो वा यो कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केहि छ की?
लोक संगीतको बारेमा यसरी अन्तर्क्रिया गर्यौ । गर्ने कुराहरू धेरै भए पनि हजुरले राम्रा राम्र प्रश्नहरू गर्नुभयो,मैले कति हद सम्म जवाफ दिन सकें सकिन त्यो त दर्शक तथा पाठकले हेरेपछि पढेपछि थाहा होला। औषतमा अहिलेको माहोललाई यीनै प्रश्नहरूले नै प्रतिनीधित्व गर्छन जस्तो लाग्छ।
१९) आफ्नो ब्यस्त समयको बाबजुद पनि हामीलाई समय दिएर गीत संगीतलाई माया गर्ने र यस क्षेत्रमा लाग्न चाहने हाम्रा लाखौं पाठकहरू र हामीलाई धेरै कुरा बुझ्ने अबसर दिनुभएकोमा बसन्त सर हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको साँगीतिक जीवन सुखमय रहोस शुभकामना!
अन्तमा तिलक सर,राजन सर र eनेपाल खबर डट कम परिवारलाई मेरा यती धेरै बिचार राख्ने अबसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद दिन चाहन्छु ।
१५ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:२५ मा प्रकाशित
नेपाली गीत संगीतमा थ्री डी को मेल, यस्तो बन्यो मिन बिष्टको “झ्याई झ्याई झ्याई”